5 Handy Transport Hacks N'ihi Luton Njem | Save A Train
Home > Train Travel Britain > 5 Handy Transport Hacks N'ihi Luton Njem
5 Handy Transport Hacks N'ihi Luton Njem
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 30/10/2020)
Ọtụtụ mgbe nọchiri anya onyinyo nke ya ibu onye agbata obi London, Luton na Bedfordshire bụ a zoro ezo mkpuru nke ahụ bụ ruru a nleta.
Tọrọ ntọala na-eso kpọọ nke na-asị site Saxon na narị afọ nke isii, ọ malitere ndụ dị ka a 'Tun' (mmezi) nke guzobere site bịara n'ikperé mmiri nke River Lea. Fast Forward a ole na ole narị afọ, na 'Lea Tun' bụ a na-ajụ-sized ahịa obodo nke ụfọdụ 800 bi, na-anwụghị tumadi site ugbo na trading.
Ụbọchị ndị a, nwa afọ Lutonites na ndị ọbịa nwere ọtụtụ nke na-adọrọ na-ha ọrụ n'aka - tinyere hotspots dị ka ubi akwụkwọ ndụ na ihe ndị mere eme na-adọrọ mmasị akụkọ ihe mere eme nke Stockwood Discovery Center na ugwu na-adịghị agbanwe agbanwe, ndagwurugwu, na hiking ụzọ ụkwụ nke Barton Hills Nature Reserve.
Ma ọ bụ nakwa ihe dị mfe ebe nweta gburugburu na a na-ghar isi n'ihi ahụmahụ n'ihu afield - ya mere na nke ahụ n'uche, ebe a na-ise kemfe iga hacks maka Luton njem.
Bus ụzọ gasị
Bus njem na-eweta na ọ ọtụtụ uru - na ọ bụ ngwa ngwa, adaba, ma nwee ike ịhapụ obere akara ụkwụ carbon karịa ụgbọ ala njem (ma ọ bụghị karịa ụgbọ oloko, ụgbọ okporo ígwè na njem ka na-ewere ndị kasị Eco-enyi na enyi njem).
Na na Luton, ọ na-emepe elu ịtụnanya ohere mara obodo, nke ga-ntabi-eme ka ị na-eche ihe ndị ọzọ n'ụlọ.
Luton Council si ụgbọ ala ụzọ Ama bụ uru na-agba izu tupu mbata gị na obodo.
Ọ bụrụ na ị na-dabere na Luton maka a mgbe, na-azụ ahịa a bike bụ a na-ghar echiche.
E nwere ọtụtụ ime ime ebe inyocha dị nso na abụọ-wheeled njem na-emekwa ka ndiwọk mbe obodo center nwa play.
Cycle King na 56-66 Dunstable Road na Luton nwere a dịgasị iche iche nke anyịnya igwe, tinyere electric, ihe iko, na ọbụna penny-farthings - ị ga-ahụrịrị ihe kwesịrị ekwesị.
Lille na London Ụgbọ oloko
Ị nwere ike mfe na-aga Luton ná nkasi obi nke a ụgbọ okporo ígwè si ebe dị ka London, Birmingham na n'ihu afield, otú e nwere bụ enweghị ihe ngọpụ bụghị tụlee ya n'ihi na gị ọzọ ezinụlọ ezumike.
Chọgharịa National Okporo ígwè si Luton Station web page na ị ga-ahụ ihe ọmụma bara ụba na na-na na site na ebe, akụrụngwa dị ka ime ụlọ mposi, na ngagharị ngagharị.
E nwere ọbụna a kemfe map iji hụ na ị na-esi na gị biarin - amamiihe.
Bordeaux na London Ụgbọ oloko
Geneva na London Ụgbọ oloko
Mgbe ị na-eme atụmatụ na-agba Luton red, ntinye akwụkwọ a taxi ime ka ị n'etiti atọ oghere bụ a maara ihe echiche.
Ị ga-ahụ ọtụtụ curbside taxi nhọrọ, ma goluton.com bụ otu n'ime obodo ndị kasị ukwuu rụọ i nwere ike ichekwa ego site ntinye akwụkwọ n'ihu online.
Ihe ozo di egwu banyere uzo ori tagzi bu na odi nkpa maka onye atuputa achoputara - ya mere ndị otu gị niile nwere ike ịnụ ụtọ ezumike ogologo abalị niile.
Luton Airport bụ ihe dị egwu launchpad maka flights na a nso nke na-akpali akpali ebe - gụnyere Aberdeen, Malaga, na Zurich - mere anyanwụ, oké osimiri, na ọbụna snow bụ nanị a obere iwuli elu pụọ.
Ọ bụrụ na ị na-na na ihe ọma na-akwọ ụgbọala n'ọdụ ụgbọ, SkyParkSecure.com nwere Luton Airport na-adọba ụgbọala na dị mma na ọnụ.
Na gị na-agba ịnyịnya stowed na ntukwasi-obi, i nwere ike ugboelu anya mmetụta kpamkpam udo.
Soro ndị a na ise kemfe iga hacks na ị ga-eme ka ndị kasị nke Luton - ị nwere ike na-ekele anyị mgbe e mesịrị!
Nke ahụ bụ anyị ndepụta! Kesaa ndụmọdụ Luton nke gị site na ịkekọrịta blog a na Twitter.
Na nke kacha mma na-adọba ụgbọala na London were SkyParkSecure, ma na nke kacha mma gbaa ụgbọ okporo ígwè London, were Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#ọdụ ụgbọ #park Luton njem ụgbọ oloko
Robbie Handy hails si Fife na Scotland na e mmasị site na ụgbọ oloko ebe ọ mbụ hụrụ ha trundling n'elu The n'Ihu Bridge - onye nke engineering ebube nke ụwa. E wezụga ụgbọ oloko, njem, na njem, ọ masịrị na-ede banyere nkà, omenala, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na English, Scots, na Jamaica Patois. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel UK, Travel Europe